यो संसार वरिपरि मनाएको छ, तर पार्थिव सहभागी हुनुपर्छ?
त्यहाँ क्रिसमस मनाउन वा होइन मनाउने बारेमा एक बहस छ। केहि गर्छन किनभने तिनीहरू ईश्वरको रूपमा "बाहिर" होइनन्। कतिपय धार्मिक परिवारका सदस्यहरू बीचको डुङ्गा चट्टान नगर्ने काम गर्छन्। केहि गर्दछ किनभने तिनीहरू सधैं छन् र परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् - वा केवल छुट्टीको मजा लिनुहोस्।
अरूलाई तर्क छ कि यो एक अधिक सेकेन्डर अवकाश द्वारा प्रतिस्थापित गरिनु पर्छ, र अझै पनि अरूले सुझाव दिन्छ कि सबै त्यस्ता बिदाहरू पाहुनाहरुलाई बेवास्ता गरिनै पर्छ।
जब यो एक व्यक्तिगत निर्णय हो, प्रत्येक पार्थिव आफैलाई बनाउनको लागि आवश्यक छ, यहाँ क्रिसमस सम्हाल्न कसरी विचार गर्ने पार्थिवहरूको लागि केहि अंकहरू छन्।
क्रिसमसको एक क्रिसमस हो
परिभाषाअनुसार, क्रिसमसले येशूको जन्म मनाउँदछ, साँच्चै यो ख्रीष्टको मास हो। थुप्रै पार्थिवहरूले विश्वास गर्दैनन् कि येशू येशू अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, र ती मानिसहरूले उहाँलाई ईश्वरीय विचार गरेनन्। कुनै पार्थिवहरू मसीहीहरू छैनन्, त्यसैले किन यस्तो मौलिक मसीही क्रान्तिमा भाग लिनुहुन्छ?
अमेरिकाको बारेमा क्रिसमस सदाचार मिथकहरू मनाउँदै हुनुहुन्छ?
क्रिसमस मनाउने नाशपातीहरूले बनाएका समस्याहरूमध्ये यो हो कि रूढिवादी प्रचारक मसीहीहरूले तिनीहरूको तर्कमा बलियो बनाएका छन् कि अमेरिका अनिवार्य रूपमा एक ईसाई राष्ट्र हो। अमेरिकामा थप लोकप्रिय र महत्त्वपूर्ण ईसाई छुट्टिहरू अमेरिकामा छन् भन्ने दाबी गर्न सजिलो छ कि ईसाई धर्मको बारेमा केहि कुरा हो जुन अमेरिकाको संस्कृतिको आधारभूत छ।
क्रिसमसका तत्वहरू पगन हुन्
यद्यपि क्रिसमसले परम्परागत रूपमा मसीही क्रान्ति भएको छ, आधुनिक क्रिसमसको समारोहका अधिकांश तत्वहरू साँच्चै पग्लान्छन्।
तर ईश्वरहरू पग्लान हुँदैनन् किनभने तिनीहरू ख्रीष्टियन हुन्। पाहुनाहरूले अरू पुरानो मूर्खतालाई विश्वास गर्दैनन्, त्यसोभए त्यसोभए जो क्रिसमसको समयमा लोकप्रिय हुने हो? पुरातन पानावाद को बारे मा केहि पनि नहीं है जो आधुनिक ईसाई धर्म भन्दा अधिक सेकेन्डर छ।
अन्य धार्मिक अवकाशहरू किन मनाउँदैनन्?
यदि क्रिसमस मनाउने संभावनामा अस्तित्वमा छक्क परेको छ भने उनीहरूले अन्य धार्मिक बिदाहरू मनाउन किन विचार गर्दैनन्।
केहि पापीहरूले रमजान को मुस्लिम अवकाश वा राम्रो शुक्रवार को ईसाई छुट्टिका को लागि केहि गर्छन। क्रिसमसको लागि अपवाद किन? प्राथमिक कारणहरू सांस्कृतिक गति जस्तो देखिन्छ: सबैले गर्छ र अधिकांश मानिसहरूसँग उनीहरूका सबै जीवन छन्, त्यसैले परिवर्तन गर्न गाह्रो छ।
पाहुनाहरूलाई कुनै छुट्टि मनाउनु पर्छ?
एक पटक क्रिसमस मनाउनको बारेमा प्रश्न पेश गरिएको छ, अर्को तार्किक कदमको बारेमा सोच्नु हो कि पापीहरूले धेरैलाई वा छुट्टै छुट्टै छुट्टै छुट्टै छुट्टै मनाउने गर्दछन्। केहि पार्थिवले तर्क दिएका छन् कि एक स्वर्गीय छुट्टी विश्वव्यापी र सार्वभौमिक, सबै मानिसहरूको समानसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, चाहे उनीहरूको सांस्कृतिक विरासत वा तिनीहरू कहाँ बस्छन्।
एक सेकेन्डेटेड अवकाश को रूपमा क्रिसमस
क्रिसमसलाई मनाउन ईथ्यास्टहरूको एक सम्भावना कारण यो समयको साथमा तेजी देखि धर्मनिरपेक्ष भएको छ। क्रिसमसमा भाग लिने वास्तवमा यसको विभिन्न क्रिश्चियन र मूर्खता जडहरू हटाउनको कारणले सेवा पुर्याउँछ।
भविष्यको पाहुना र क्रिसमस
आजथी र क्रिसमस बीचको सम्बन्ध जटिल छ। केहि पार्थिवहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा मनाउन जारी राख्नेछन्, केहिले मात्र अंशहरू मनाउँनेछन् र अन्यहरूले यसलाई अस्वीकार गर्नेछन् - यी केही छुट्टिने वैकल्पिक छुट्टिहरू र सबै भन्दा कम अल्पसंख्यक छुट्टै छुट्टै छुट्याउने छैनन्।
जबसम्म पुरातत्वले अमेरिकामा "सामान्य" स्वीकार्न खोज्छ र तिनीहरू चीज गर्नदेखि टाढा जान्छन् जसले तिनीहरूलाई अलग-अलग वा अजीब रूपमा सिंगल गर्न सकिन्छ। आज क्रिसमस मनाउने भन्दा बढी अमेरिका पनि छैन, त्यसैले पाहुनाहरू जो फिट गर्न चाहानुहुन्छ पनि कम्तिमा क्रिसमस समय वरिपरि केही काम गर्नेछ।
तथ्य यह है कि क्रिसमस यति धर्मनिरपेक्ष भएको छ भने पनि धेरै पार्थिवहरू क्रिसमस छोडेर रोक्न सक्नेछन्। यदि दिनले महत्त्वपूर्ण ईसाई तत्व बसाएको छ भने आत्म-सचेत रहनु नै क्रिसमस विरोधी क्रिसमसका साथ सहानुभूति हुनेछ। धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिहरूलाई मनाउनको लागी एक धर्मनिरपेक्ष छुट्टी आसान छ।
चार्ल्स डी मोंटेसेक्वु जीवनी
धर्मबाट स्वतन्त्रता र धर्मको स्वतन्त्रताबीचको भिन्नता
कुराकानी गर्ने सागरको अभाव
अस्तित्ववादीहरूले इस्लामको आलोचना गर्छन्?
विज्ञान प्रयोग तपाईं घर मा गर्न सक्नुहुन्छ
कार्ल ओ। सोवेरको जीवनी
इभोल्युशन जर्ब स्ट्रिप्स बताउँछ
के म्युचुअल अवधारणा दायित्वको पवित्र दिन हो?
स्लपको व्याख्या गोल्फमा दर्जा
1 999 इरा वोक्सवैगन जेटा फ्यूज नक्शा
वैकल्पिक शॉट कसरी प्ले गर्ने
हेलियम गुब्बारे किन डिफ्लेट गर्नुहुन्छ?
के एक अपशिष्ट! अपशिष्ट निपटान र पुनर्चक्रण
डलास ब्यापटिस्ट विश्वविद्यालय प्रवेश
तपाईंको लागि उत्तम नृत्य शिक्षक खोज्दै
विलोबाट एस्पिरिन कसरी बनाउने?
न्यूयर्क कलोनी को बारे मा जानना मूल तथ्य
मिटरहरूमा पैर कसरी परिवर्तन गर्ने?
इटालियन Verb Conjugations: 'Farsi'
रचनात्मकता र रचनात्मक सोच
एक Permutation परीक्षा को उदाहरण